WHIZZO TYPING TUTOR | MoeMaKa Burmese News & Media
3 Responses to WHIZZO TYPING TUTOR
Tin Tin Oo on July 17, 2012 at 2:06 pm
Thanks much for your free Myanmar language typing lesson. After finishing lesson ” မမဝဝထထက၊အကပထမ။ကပါကပါမမ၇ာ၊ညညလသာသာ။ညအခါငါစာ၇၊မမဝဝထထက။ “, what should we try for other Myanmar ” alphabets & vowels ” with thanks again.
Naing Kyaw on July 18, 2012 at 10:43 am
အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရလို့ မြန်မာစာရိုက်လေ့ကျင့်လိုသူများအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ် ၊ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ် ။ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ။
aye aye on July 19, 2012 at 6:07 pm